सामाजिक संजाल - अब फेसबुकमा सबैभन्दा माथि ‘बेस्ट फ्रेण्ड’ देखिने
फेसबुकको नयाँ नियम : गम्भीर नीति उल्लङ्घन गर्ने प्रयोगकर्तामाथि प्रतिबन्ध
एजेन्सी । आफ्नो नीति विपरीत आतङ्कवाद र हिंसासँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण गर्ने प्रयोकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नयाँ प्रतिबन्धात्मक सर्तहरू ल्याएको छ। ५१ जनाको ज्यान जाने गरी न्यूजिल्यान्डको क्राइस्टचर्च मस्जिदमा भएको हमलाको फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। सोहि हमलालाई आक्रमणकारीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि फेसबुकले उक्त घटनामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै त्यस्तो कदम उठाएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
समानता कायम गर्ने बजेट ल्याउनुस् : गिरी
काठमाडाैँ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले देशलाई सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएन भने विकास र समृद्धिको कुरा नारामा मात्र सीमित हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने,“आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाउन हाल लिदै आएको अर्थ नीतिको वैकल्पिक धार समात्न सक्नुपर्छ, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने मात्र होइन, समानता कायम गर्ने बजेट बनाउनुपर्छ ।” गिरी नेपालकाे राजिनतीमा समाजबादी चिन्तक, निडर र अनुयायी मानिन्छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सासंद गगन थापाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको मृत्युमा भावुक हुँदै ‘आफुले असल साथी गुमाएको बताएका छन्’ । उनले ‘देशले एक आशातित नेता गुमाएको भन्दै श्रद्धान्जली दिएका छन्। उनले ट्विट गर्दै लेखेका छन् –‘ रविन्द्र दाईको दुर्घटनाको खबरले स्तब्ध भए,मनमा झिनो आशा थियो तर त्यो आशा धेरै समय टिक्न सकेन ।	थप पढ्नुहोस्
कुनै पनि सत्यको सँघर्षअघि दुन्दुभी बज्ने गर्छ । गायक पशुपति शर्माले दुन्दुभी फुकीसकेका छन् । अब जन संघर्षको ‘गान्डीव’ उठन मात्र बाँकी हो । शासकहरुले प्रतिक्षा गरदा हुन्छ । हो, ‘पशुपति शर्मा’ प्रकरणबाट एउटा सुखद सँकेत मिलेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
[caption id="attachment_56413" align="alignleft" width="300"] कुसुम विश्वकर्मा[/caption] काठमाडौं । नेपालसहित विश्वभर १४ फेब्रुअरीका दिन भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रेमदिवस मनाइँदैछ । विशेष गरी युवायुवतीले यसलाई विशेष चाडकै रुपमा मनाउने गरेका छन् । प्रेम दिवसलाई अहिले राष्ट्रिय चाड नै मान्नेहरूको पनि कमी छैन । यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि भ्यालेन्टाइन डे को अवसरमा युवायुवतीहरु प्रेमको रङ्गमा रंगिने गरेका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा पनि प्रेमदिवस विशेष रुपले मनाउने गरिएको छ । पश्चिमेली सांस्कृतिले गर्दा आज हाम्रा पुराना मुल्य मान्यता, संस्कार र परम्परा खण्डित भइरहेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
धुर्मुस जी ! नमुना नेपाल बनाउने भनेर दिएको चन्दा कहाँ गयो ?’
धर्मुसेलाई ‘माग्ने’ बनाई जनतासँग मागेको पैसाले क्रिकेट रंगशाला बनाउनु थियो भने यो देशमा गणतन्त्र किन ल्याएको ? पंचायतकालमा पनि कलाकारहरुले चन्दा उठाएर धेरै ठाउँमा पंचायत रजत स्तम्भ र द्वारहरु बनादिएकै थिए, एउटा रंगशाला पनि बनाइदिन्थे । गणतन्त्र आएपछि राज्यले नै जनताका लागि सबथोक गर्छ भन्ने सपना देखाएर जनताका छोराछोरीलाई जर्बदस्ती हतियार बोकाइयो । पढिरहेका कलिला युवालाई जनवादी शिक्षाको दुहाइ दिएर युद्धमा होमियो र कालान्तरमा तिनलाई अयोग्य भनेर लत्याइयो, जो आज विदेशमा सस्तो मुल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन् ।	थप पढ्नुहोस्
साताको राशिफल : पुस १४ देखि २० गतेसम्म
मेष 'चु चे चो ला लि लु ले लो अ' पहिलेको तुलनामा अप्ठ्याराहरू घटे पनि मनमा सन्तोष भने हुने छैन । व्यावसायिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा कमी आउन सक्छ । पारिवारिक असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ । मनमा शङ्का र भय भइरहला । वृष 'इ उ ए ओ वा वी वु वे वो' साताका सुरुका दुई दिन शनिबार र आइतबार केही काम बिग्रे पनि सोमबारपछिका दिनहरू राम्रा छन् । बाधाहरु आइपरे पनि तिनलाई समाधान गर्न सकिने योग छ । मिथुन 'का कि कु घ ङ छ के को हा' स्वास्थ्य बाधा र कार्यबाधाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यकै लागि केही खर्चमा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तर आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति पनि आउने छैन ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । “फेसबुकबाट प्रेमसम्बन्ध स्थापित नगर्नुस् अन्यथा मैलेजस्तो दुःख पाउनुहोला,” पाकिस्तानी जेलमा छ बर्ष जीवन विताई यसै हप्ता स्वेदेश फिर्ता भएका एक भारतीय नागरिकले शुक्रबार एक सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा बताए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउने क्रममा एक जना पाकिस्तानी किशोरीसँग ‘मायाजाल’ मा परेपछि उनलाई भेट्न सन् २०१२ मा अफगानिस्तान हुँदै पाकिस्तान पुगेका भारतीय इन्जिनियर हमिद नेहाल अन्सारीले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरीको निधनप्रति प्रधानमन्त्रीद्वारा श्रद्धाञ्जली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबरअघि ट्विट गर्दै पूर्वप्रम गिरीको निधनको खबरले आफूलाई दुःख लागेको र यस घडीमा स्व गिरीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार र आफन्तजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्